Tim Cook wuxuu u dabaaldegayaa shan sano markii uu ahaa Maamulaha guud ee Apple abaalmarinno milyaneer ah | Wararka IPhone
Tim Cook wuxuu u dabaaldegayaa shan sano oo ah agaasimaha guud ee Apple oo leh gunooyin milyaneer ah
Alejandro Cabrera | | Noticias, Alaabada Apple
Maanta ayaa laga joogaa shan sano tan iyo markii Tim Cook loo magacaabay agaasimaha guud ee Apple Ogosto 24, 2011, isla maalintii uu aasaasihii shirkadda Steve Jobs si rasmi ah isaga casilay jagada agaasime guud wuxuuna kula taliyay Guddiga Agaasimayaasha inay u magacaabaan Cook ku xigeenkiisa joogtada ah.
Hadda wuxuu shan jir ku yahay madaxa Apple, Cook wuxuu xaddiday gunnooyinka saamiyada ee ka badan $ 100 milyan. Boondhigu wuxuu kuxiran yahay maamulkaaga iyo waxqabadka Apple labadaba adiga oo kusocda jihadaada, oo ay kujirto wadarta celintaada saamile ahaan qaraabada S&P 500
Curaarta Cook waxaa ka mid ah 700.000 oo unug oo ah saamiyada la xaddiday, oo maanta la xoojiyay iyada oo qayb ka ah xirmo magdhow ballaaran oo leh in ka badan 4,7 milyan oo saami, marka lagu daro kii ugu horreeyay ee lixda qaybood ee saamiga xaddidan ee muddada xaddidan ee 280.000 ee maanta la keenay. Isku darka saamiyada 980.000 waxaa lagu qiimeeyaa ku dhowaad $ 106.7 milyan iyadoo lagu saleynayo qiimaha xiritaanka AAPL ee $ 108,85 Talaadada.
Qeyb xaddidan oo alaab ah, ama RSU, waa qaab magdhow ah oo lagu qiimeeyo saamiyada shirkadda, laakiin saamiga lama bixinayo waqtiga deeqda. Taa baddalkeeda, qofka qaataha ah wuxuu helayaa saamiyada taariikh dambe, guud ahaan keliya haddii ay weli yihiin shaqaalaha shirkadda. Cook wuxuu shaqsi ahaan codsaday in abaalmarintiisa wax laga beddelo si loogu hoggaansamo nidaamka magdhowga waxqabadka ku saleysan ee 2013. Mid kale oo ka mid ah 700.000 oo RSUs ah ayaa loo qorsheeyay in la geeyo Agoosto 24, 2021, in ka badan 280.000 RSUs 24-ka Agoosto illaa 2021-ka.
Saamiga saafiga ah ee Cook, wuxuu u maleynayaa inuu ku sii jiro shirkadda illaa Agoosto 24, 2021 oo uu la kulmo bartilmaameedyada waxqabadka, waxaa lagu qiyaasaa inuu ka badan yahay $ 500 milyan iyadoo lagu saleynayo ikhtiyaarrada uu hadda haysto iyo RSU la siiyay. Tim Cook wuxuu horey u ballan qaaday inuu ku deeqayo inta badan hantidiisa, oo ay kujirto dammaanadahaas dammaanadda, hay'adaha samafalka. Bishii Maajo 2015, tusaale ahaan, Cook wuxuu ugu deeqay ku dhowaad 50.000 saamiyada Apple, oo qiimihiisu yahay $ 6.5 milyan, hay'adaha samafalka ee aan la shaacin.
Cook wuxuu kormeeray bilowga Apple Watch, MacBook Pro oo leh muuqaalka Retina, aaladda 12-inch ee MacBook-ga ah, iPad Pro, noocyada kala duwan ee iPhone iyo iPad; sidoo kale codsiyada sida Khariidadaha Apple, Apple Music, Apple Pay, Siri, iyo badeecooyin iyo adeegyo kale oo fara badan tan iyo markii uu qabtay xilka shirkadda sanadkii 2011. Apple waxay noqotay shirkadda adduunka ugu qiimaha badan sanadkii 2012, isaga oo hoos imanaya, oo sii wadaya inuu cinwaankaas illaa maanta hayo. The Saamiyada Apple ayaa sare u kacay 132% tan iyo markii loo magacaabay Cook CEO shan sano ka hor.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Tim Cook wuxuu u dabaaldegayaa shan sano oo ah agaasimaha guud ee Apple oo leh gunooyin milyaneer ah
Waa maxay waallida tirooyinka iyo waxyaabaha aanu qofku lahayn fikrad fog